ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: August 2008
ဘူးလာ။ဒါကလဲစိတ်ထားတတ်မယ်.သူရဲ.စိတ်နဲ.ပဲဆိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုံးက
Posted by Unknown | at 12:48 AM |0comments
Posted by Unknown | at 12:28 PM | 1 comments
Posted by Unknown | at 1:34 AM |0comments
လူဆိုတာ ကိုယ်မြင်ဖူးတာ ကြားဖူးတာတွေကို အခြေခံပြီး စဉ်းစားတာဆိုတော့ ဘဝ အတွေ့အကြုံမတူရင် အမြင်လည်းမတူဘူး၊ ဒီလိုလူတွေ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံတော့ မတူတဲ့ အမြင်တွေ ဖလှယ်ကြတာ သိပ်အကျိုးရှိတယ်။ မင်းဘယ်သူ၊ ငါဘယ်သူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုလို့ ရရင်သိပ်ကောင်းမယ်၊ အခုတော့ အဲဒီလို မသိကြတော့ ကြားလူက ဝင်နှောင့်တာ၊ ဝင်ရန်တိုက်တာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ တချို့စာအုပ်တွေမှာ ဒီလိုဖတ်ရတယ် (စာအုပ်ပြုစု သူ၏ အမြင်ဟု မဆိုလိုပါ၊ ဆွန်ဇူး၏ အမြင် ဖြစ်ပါသည်)။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့၏ အခြားအမြင့်မားဆုံး အရည်အချင်းတရပ်မှာ ရန်သူတို့၏အင်အားစုများကို ပူးပေါင်းခြင်း မပြုနိုင်အောင် ဟန့်တား ထားနိုင်မှုဖြစ်သည်။
ရန်သူ့နိုင်ငံအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်၏။ ထိုနည်းလမ်းများမှာ ရန်သူ့နိုင်ငံမှ အကြံပေးပညာရှိ မူးမတ်များကို သွေးဆောင်စည်းရုံး၍ စွန့်ခွာစေခြင်း၊ သူလျှို အထောက်တော်များ စေလွှတ်၍ အုပ်ချုပ်ရေး ပျက်ပြားအောင် ဖန်တီးစေခြင်း၊ အာဏာရှိ မူးမတ်များအား ပရိယာယ်သုံး၍ သွေးကွဲစေခြင်း၊…..ရန်သူ၏ မဟာမိတ်များက ရန်သူကို မကူညီစေရန် သံတမန်နည်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့်သံတမန်ရေးရာများတွင် လှည့်ဖျားစစ်ဆင်ရာ၌ ရန်သူ၏ မဟာမိတ်နှင့် ရန်သူတို့အကြား သဘောထားကွဲလွဲစေရန် လည်းကောင်း၊ ရန်သူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းလုံးမှုပြိုကွဲစေရန် လည်းကောင်း ဖန်တီးခြင်းမျိုး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
(စစ်မဟာဗျူဟာအမြင် ၊ ဗိုလ်မှုးကြီးမြင့်အောင်)
(ဆုန်ဇု၏စစ်ပညာကျမ်း၊ လကရ(ထွေ) ၀၀၁၀၊ လေ့ကျင့်ရေးညွှန်ကြားရေးမှုးရုံး၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ)
ကိုယ့်အချင်းချင်း မပွင့်လင်းနိုင်တာကို အဲဒီလို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခြုံခိုတိုက်မည့်သူတွေကို တော့သတိထားကြပါ၊ ကိုယ့်စကားကို ထောက်ခံသလိုလိုနဲ့ အလွန်အကျွံဘက်ဆွဲသွားရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တားပေးပါ။ အခု တိုင်းပြည်အတွက် တကယ့်စေတနာနဲ့ ပြောတဲ့ သူတွေ အများကြီးတွေ့ရလို့ သိပ်ဝမ်းသာတယ်။
Cbox မှာဆဲတဲ့ဆရာတွေကိုလည်း မှာချင်တယ်၊ တခါတလေ ဆဲလိုက်တာက စိတ်ထဲက အကျိတ်အခဲတွေ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရလို့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်တောင် ကောင်းတယ် ပြောရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆဲချည်းနေရင် နောင်ဘာမှ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားပဲ ကိုယ်မကြိုက်တိုင်း ဆဲချည်းပဲနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီး ပါသွားဦးမယ်။ ဒေါသအလျှောက်တော့ ဆဲပြီးပြီ၊ ဒေါသမပါပဲ ငါတကယ် ပြောသင့်တာ ဘာလဲ ဆက်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ။
နောက်တခုက ဆွေးနွေးရာမှာ လူငယ်တွေကို စဉ်းစားပေးစေချင်တယ်။ မသိလို့ ရိုးရိုး သားသား ကန့်ကွက်တာ၊ မေးခွန်းထုတ်တာကို “ခွေးသားလေး၊ မင်းဘာသိလို့လဲ၊ ဒါတွေဟိုဟာတွေသိရဲ့လား၊ မသိပဲလာမပြောနဲ့ ” လို့ချည်း အညွန့်ကျိုးလောက်အောင် မဟောက်ပဲ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။ အဖိုးကြီးတွေ “ငါ့မြေးကြီးလာရင် မင်းမြေးတွေကိုသတ်လိမ့်မယ်ကွ” ဆိုပြီး ရန်ညိုးတွေကို အမွေပေးတာမျိုးတွေလည်း မလုပ်စေချင်ပါ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားက ရန်ညှိုးတွေ ကိုယ့်သင်္ချိုင်းမှာ တပါတည်း မြှုပ်လိုက်စေချင် ပါတယ်။
ဦးနုက စင်ပြိုင်အစိုးရကြေငြာလို့ ဦီးနေဝင်းက အာဏာသ်ိမ်းခိုင်းလိုက်တာ အခုထိ အားလုံး ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။ အခုလည်း လူငယ်စစ်သားလေးတွေနဲ့ လူငယ်ကျောင်းသားလေး တွေ ရန်စောင်နေတာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် မကောင်းပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတွက်ပါ။ ဘယ်သူမှ ချို့ယွင်းချက် မကင်းပါ၊ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ၊ မိသားစုပြဿနာ လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်၊ သမိုင်းထဲက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဘဝတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ၊ ပြောချင်ရင်လည်း ခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စနဲ့ မနွယ်စေချင်ပါ၊ ဥပဒေချိုးဖေါက်ရင် တရားစွဲပါ၊ ခေါင်းဆောင်မှုမှားရင်၊ ညံ့ဖျင်းရင် နေရာက ဖယ်ရှားပြစ်ပါ။ လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာသောအားဖြင့် လျစ်လျူရှုစေချင်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ အချင်းချင်း နားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့၊ ကောင်းတာတွေလည်း မြင်ကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် လက်နက်ကိုင် တိုက်လာပြီး ကိုယ့်သားမြေးတွေ ကျတော့ ဒီလိုဒုက္ခတွေ မကြုံစေချင်တော့လို့ အလျော့ပေးလာတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ “မတရားတာ လုပ်ရင်မခံဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ချမယ်” ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုံးကန်နေရတဲ့ကြားထဲက အချိန်လေး ဖဲ့ပေးပြီး မမောနိုင်မပန်းနိုင် ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး ပြောဆိုငြင်းခုံနေတဲ့သူတွေ၊ အားလုံးဟာ လေးစားစရာလူတွေပါ (ဒီလို အခြေအနေဆိုးကြီးကို အမြတ်ထုတ်အခွင့်ကောင်းယူပြီး မတရားစီးပွားရှာနေသူတွေကိုတော့ ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်) ။ တချို့လူတွေကတော့ ဘေးလွတ်ရာ ပြေးခိုရင်း ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ဒုက္ခတွင်းမှာ ချန်ထားခဲ့ရတာ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မကင်းသလို ခံစားရပြီး ဒီဒုက္ခကနေ မြန်မြန်ကျွတ်စေချင်လွန်းလို့ အသေခံ ဗုံးခွဲခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းး၊ နအဖ လုပ်သမျှတရားသလား၊ မတရားသလား မကြည့်တော့ပဲ အတင်းအလျှော့ပေးခိုင်းသူကခိုင်းနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အကြံတွေပေးနေမိတာ လဲရှိရဲ့။ ရိုးရိုးသားသား ဒီလိုပြောမိတဲ့သူတွေကို ပိုက်ဆံပေးတဲ့သူအကြိုက်လိုက် ပြောနေတဲ့ “နိုင်ငံရေး ဖာသည်” တွေနဲ့ တန်းတူထားပြီး ဆဲဆိုပြစ်တင်တော့ မပြုသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
စကားစပ်လို့ ဆိုရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို sanction ကိစ္စနဲ့ အပြစ်တင်တာ မတရားဘူးလို့ ရှေ့နေလိုက်ပါမယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ လက်နက်မကိုင်ဘူးဆိုရင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက တရားဝင်အရေးယူနိုင်တာ ဒီတနည်းပဲရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလဲ ဒီလက်နက်ပဲသုံးပါတယ်။ နအဖရဲ့မတရားမှုတွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်တယ်၊ လက်နက်လည်း မကိုင်ချင်ဘူး၊ လေနဲ့ဆန့်ကျင်ရုံ မဟုတ်ပဲ တကယ်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လိုရင် ဒီနည်းပဲရှိပါတယ်၊ အခုကြုံရတဲ့ ပြဿနာက ဒီနည်းက ဆင်းရဲသားတွေကို ပိုထိပြီး၊ လူတွေဘယ်လောက်ကြပ်ကြပ် ဆင်းပေးစရာမလိုတဲ့ အစိုးရမျိုးမှာသွားသုံးမိလျက်သား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းကို ရှာဖွေကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်၊ တကယ်လို့ sanction သာမရှိခဲ့ရင်လည်း နအဖ ရဲ့ အချိုး၊ လေသံ ဘယ်လိုရှိမယ် အားလုံး မှန်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ sanction တွေ ပြန်ရုပ်သွား လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ လေးလေးဝါး (ကလေးအတွေး) သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စက အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်၊ မြန်မာအစိုးရဘက်က ခိုင်လုံတဲ့ ကတိတွေ ပေးနိုင်မှ၊ အလားအလာကောင်းတွေ ရှိလာမှ ပြန်ရုပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ပြောရရင် အတိုက်အခံတွေကို လက်နက်ကိုင်စေချင်တာ နအဖ ဘက်က ဖြစ်ပါတယ်။
“မင်းတို့တောခိုချင်ရင် နယ်စပ်အထိ လိုက်ပို့ပေးမယ်” လို့ တောင်စိန်ခေါ်ဖူးပါတယ်။
သဘောထားကွဲလွဲမှုတိုင်းကို ဒီလို အင်အားသုံးဖြေရှင်းတာ မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ပြည်တွင်း သူပုန်ခေတ် ကလည်း ညှိနှိုင်းရေးနဲ့ အပြုတ်တိုက်ရေးမှာ အရွေးမှားလို့ အခုထိ ပြဿနာရှည်ခဲ့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောထားကို သဘောမတူတဲ့ သူတိုင်းကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်တာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးကို တားဆီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ တမျိုးသားလုံး ကိုယ်ပြောစရာရှိတာ ပြောဆိုညှိနှိုင်းနိုင်မှ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဖြစ်ပါမယ်။ နအဖဘက်က ပြုပြင်သင့်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ “အပြုတ်တိုက်” အစဉ်အလာကို စွန့်လွှတ်သင့်ပါပြီ။
တပါတည်း အတိုက်အခံဘက် က NLD အကြောင်း ကျွန်တော့်အမြင်ကို ဆက်ပြောပါရစေ။
ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီစသည်ဖြင့် ငြင်းခုံမှုများနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြောရရင် organizational structure ဆိုတာ အဲဒီအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်မည့် functions တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် tune လုပ်ထားရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကို စစ်တိုက်ခိုင်း ရင် ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတာနဲ့ အကုန်သေကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ထက်အောက်အမိန့်နာခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်တပ်ကို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခိုင်းရင် အကုန်ပျက်စီး မွဲပြာကျကုန်လိမ့်ပါမယ်။ ကိုယ်လုပ်မရတဲ့ အလုပ်ကို ဇွတ်မလုပ်သင့်ပါ၊ အများနစ်နာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုပဲ NLD လည်းဖွဲ့စည်းပုံညံ့တာ အဆန်းမဟုတ်ပါ၊
မြန်မာတွေအားလုံး အဓိကထား သင်ယူလေ့လာရမည့် ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖရော NLD မှာပါ လူသစ်လဲသင့်တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတ္တိ၊ ပညာ၊ စိတ်ဓါတ် ကောင်းတဲ့ လူငယ်လူသစ်တွေ ဘယ်မှာလည်း။ လုပ်ပါ့မယ်ဆိုရင်ကော လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအမြင် အသစ်တွေနဲ့ လုပ်ခွင့်ရပါ့မလား၊ လိုအပ်လို့ ၁၈၀ ဒီဂရီ လမ်းကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုမှာလား။ လူငယ်အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းရသွားလို့ အဆင်ပြေသွားရင် တားဆီးမှာလား။ လမ်းမှား၊ စံနစ်မှားကြီးကိုပဲ ဆက်လျှောက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလူကောင်းက ဝင်လုပ်ပါ့မလဲ။ လောဘကြီးတဲ့ အခွင့်အရေးသမား၊အထက်ဖားအောက်ဖိ၊ conscience မရှိတဲ့ လူငယ်တွေပဲ ဝင်လုပ်လိမ့်မယ်။ အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်၊ ကိုယ်နဲ့ မိသားစု အန္တရာယ်မရှိရင် တိုင်းပြည် အတွက် ဦးလည်မသုန်လုပ်မဲ့ လူငယ်၊ လူလတ်တွေ အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်၊ အခုတော့ နအဖရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်တဲ့ အကျင့်ကို ကြောက်ရလို့ အရေးကြုံရင် ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေကြတယ်။ ဒီလောက်နှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာ ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီဟာ “ကျားလိုက်တုန်း ဝါစဉ်ရွေး” ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ လူသစ်တွေတင်သင့်တာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့်လာလုပ်ဝံ့တဲ့ လူငယ်ရှားပါတယ်၊ မဟုတ်မခံချင်စိတ်တခုတည်းနဲ့ ဘဝပျက်၊ အသက်အသေခံဝံ့တဲ့ သတ္ထိခဲတွေသာ လောလောဆယ်ရှိနေပါတယ်။ နအဖကတော့ ၉၀ ရလာဒ်ဟာ NLD ပျက်မှ ပျက်မှာမိုလို့ သေချာပေါက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ပါတီတွင်းဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို အင်တာနက် ကတဆင့် ပြည်သူကို မတင်ပြနိုင်တာ အဆိုးဆုံး အားနည်းချက်လို့ ထင်ပါတယ်။
တတိယအုပ်စု (Third Party) အမည်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကြောင်းပြောပါမယ်။ သူတို့တွေ အားလုံးက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထု၊ ယိုယွင်းယိမ်းယိုင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေကို ထောက်ထားပြီး ကိုယ့်ဘက်က မှန်ပေမယ့် နအဖကို အတိုက်အခံချည်းပဲ ဆက်မလုပ်နဲ့၊ တတ်နိုင်သလောက်အလျော့ပေး ရသလောက်အခွင့်အရေးယူပြီး တိုင်းပြည် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေ စလုပ်ထား ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြ ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် တူကြပေမယ့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပုံ ကွာခြားကြပါတယ်။ တချို့က နအဖ ကို မျက်နှာချို သွေးတာလွန်ပြီး နအဖ မတရားတာတွေကိုတောင် ကာကွယ်ဖာထေးလွန်းလို့ ဖာသည်ကြီးလို့ အပြောခံရတယ်၊ နအဖ ကြက်တူရွေးက မပေးတဲ့ ကတိတွေကို ရမှာသေချာတယ်လို့ မစားရ
ဝခမန်းတွေ ကဲပြောကြတယ်၊ နအဖက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး သူရေးတဲ့စည်းကမ်း သူဖေါက်သွားတော့ သူတို့လဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်။ တရားမျှတမှုတို့၊ အမှန်တရားတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာလို့နိုင်ငံရေးလုပ်နေမလဲ။ အခု အမှန်ကို လေသံတောင် မဟရဲရင် လွှတ်တော်ထဲကျမှ တကယ်ဖဲ့မယ်ဆိုတာ စိတ်ချရပါ့မလား။ နအဖကို ပူးသတ်ပြီး ဇပ်ကနဲ ဓားနဲ့ထိုးမယ့်သူတွေ လောလောဆယ် အလေ့အကျင့်ရအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောကိုဓားနဲ့ ထိုးနေကြတယ်။ ရောမကို ပိုချစ်လို့ ဆီဇာ့ကို သတ်လိုက်ရတယ် ပြောဦးမလား မသိပါ။ တတိယလမ်းကြောင်းတခု ရှာမပြပဲ နအဖ လမ်းကိုလိုက်မယ့်သူတွေကို တတိယအုပ်စုလို့ သတ်မှတ်ရ ခက်နေတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတဲ့ ပညာတတ်တွေဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို အားမရဘူး၊ ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်နိုင်အောင်သာ ကကြပါလို့ပဲ ပြောချင်တော့တယ်။ မွန်မြတ်တဲ့ လက်တွေ့လုပ်ရပ်နဲ့ တတိယအုပ်စုတွေ ထွန်းကား လာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
နောက် ဘာဆက်လုပ်လို့ ဘာဆက်ဖြစ်ကြမယ် နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆွေးနွေးနေကြတာတွေကို ပြန်စုစည်းတင်ပြရရင်တော့ အင်အားသုံးတဲ့ နည်းမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမေရိကန်တဦးဦးရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အောက်ကနေ စစ်ရေးအရ အရေးယူတာနဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ ထိထိရောက်ရောက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနည်း ၂ ခုကို တင်ပြကြပါတယ်။
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးနည်းမှာ တရုပ်၊ အိန္ဒိယ တို့ရဲ့ကြားဝင်ကူညီမှုဖြင့် နအဖနှင့် အတိုက်အခံ တွေ ဆွေးနွေးပြီး
၁။ ၉၀ ရလာဒ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ကာ NLD က အစိုးရ ဖွဲ့ခြင်း ( ၉၀ ရလာဒ်ကို အစမဖျောက်နိုင်ရင် ၁၉၉၀ အစိုးရ နဲ့ ၂၀၁၀ အစိုးရ စင်ပြိုင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုမဖြစ်အောင်၊ တကယ်လို့ ဖြစ်လာရင် နအဖ က အင်အားသုံးဖြိုခွင်းပါလိမ့်မယ်)
၂. နအဖ နဲ့ NLD ပူးတွဲ အစိုးရဖွဲ့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် နအဖ က key positions များလောက်သာယူထားပြီး ကျန်နေရာများဖြင့် NLD က အစိုးရဖွဲ့ခြင်း။
၃. Roadmap ကို All-inclusive ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ဆက်လုပ်ခြင်းတို့ကို ဆွေးနွေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါတွေဘာမှ ဖြစ်မလာရင်တော့ လက်ရှိ နအဖ စိတ်တိုင်းကျ Roadmap အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးကြတာတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရကြမလား၊ သူတို့ကကော ဝင်ပြိုင်မလား၊ အခုလက်ရှိမတရားအတားအဆီး အချုပ်အချယ်တွေကို ဖယ်ပေးလိုက်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ NLD ပါတီ အလျင်အမြန် ပြန်လည်အင်အားကြီး လာနိုင်မလား၊ ဒီလိုဖြစ်မလာအောင် ဘယ်နည်းတွေနဲ့ နအဖ ညစ်မလဲ၊ လက်ရှိအနိုင်ရ NLD မဖျက်ရသေးပဲ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး အစိုးရအသစ်တင်ဝံ့ပါ့မလား၊ အစိုးရသစ်ထဲ အချောင်ဝင်ထိုင်နေတဲ့ စစ်သားတွေကို အစိုးရဘယ်နှစ်ဆက်လောက်ပြီးရင် ဖယ်ရှားနိုင်မလဲ၊ အစိုးရသစ်မှာ တရားဝင် စစ်တပ်သြဇာ ကျသွားမလား၊ ပိုအားကောင်းလာမလား စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖ အနေနဲ့ကတော့ သူတို့လူ သမ္မတ ရရင်ရ၊ မရရင်လည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စစ်တပ်ရဲ့ တထီးတနန်းကြီးစိုးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ နှစ်ဆင့်ကာထားပါတယ်။ ဒီလို စစ်တပ်က တရားဥပဒေအထက်မှာ ရှိနေသ၍တော့ နယ်တွေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လူအခွင့် အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ ကနေ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နအဖ ဘက်က ညီလာခံတက်ထားတဲ့ အဖွဲ့တိုင်းကို သူတို့ရဲ့ အခါပေး တဆညပါတီ၊ ပြည်သူအရေခြုံ ကြံ့ဖွံ့ပါတီတို့နဲ့ ဖိအားပေး မဟာမိတ်ဖွဲ့စေပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားမဲတွေအရယူ ဖို့စီစဉ်ထား ပါတယ် (ကြံ့ဖွံ့မှာ ဝန်ထမ်းတွေကို ဖိအားပေး ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်း နိုင်ငံရေး မလုပ်ရ စည်းကမ်းအရ တဖွဲ့လုံးကို နိုင်ငံရေး ပါတီပြောင်းဖို့ ဥပဒေအရ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ ကလိမ်ကကျစ်တခု ထပ်လုပ်ရပါမယ်)။ တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အကျိုးကာကွယ်မည့် အရပ်သားပါတီတခုဖွဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခိုင်းမယ်၊ ကိုယ်ဒေသအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှုရှိအောင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က စောင့်ရှောက် ပေးမယ် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားနေပုံ ရပါတယ် (ဒီနေရာမှာ အဲဒီ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဘက်လိုက်မှုလုပ်မလုပ်၊ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ရရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကို ဖျက်ဖို့သဘောတူမှာလား၊ နအဖက ဘယ်အဆင့်ကတည်းက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို အတင်းဖျက်ခိုင်းမလဲ စသည်ဖြင့် စဉ်းစားစရာ ရှိပါတယ်)။ စုစည်းထားတဲ့ အတိုက်အခံသဘောမရှိတော့ပဲ save your own ass သဘောနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြရမည့်ပုံပါ။ တက်လာတဲ့ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကလည်း တနိုင်ငံလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဖြစ်သလို၊ ရသလောက် ဆက်စခန်းသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ် နဲ့ ပြည်သူ၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြား အကြေအလည် မဖြေရှင်းရသေးလို့ မကျေနပ်ချက်တွေ ဆက်မျိုသိပ်ထားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းအောင်ပြင်မယ် ဆိုရင်လည်း ပြင်ရ ခက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ အတားအဆီး အမျိုးမျိုးကို အရင် ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးကို အဲဒီပုံအတိုင်းသွားဖို့ တတိယအုပ်စုတွေက စိတ်စောနေကြပါပြီ။
နောက် တခုက ၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲချင်းကွာခြားပုံပါ၊ ပထမတခုကို ဗိုလ်စောမောင် က လုပ်ပေးပြီး နောက်တခုကို ဗိုလ်သန်းရွှေက လုပ်မှာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ချင်း ကွာခြားမှုဟာ အဓိကဖြစ်ပါမယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ သိက္ခာသမာဓိကို ပြနေပါတယ် ။ အချို့ တတိယအုပ်စုတွေကတော့ နအဖ ကို ရင်မဆိုင်ပဲမွေးထားတဲ့ အားတွေ အကုန်စုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တာစူနေပါပြီ၊ ရထားကြီးထွက်တော့မယ်၊ တက်ကြ၊ တက်ကြလို့ ဆော်သြနေကြပါတယ်၊ ဘယ်သွားမယ့် ရထားလည်း သေချာမပြောကြပါဘူး၊ တော်ကြာ မန္တလေးသွားမယ့်သူ မြို့ပတ်ရထားစီးမိနေမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဝါဆောသွားမှာလား၊ ဆိုက်ဗေးရီးယား ပို့မှာလား၊ Auschwitz မှာ ဂိတ်ဆုံးမှာလား အရင်စုံစမ်းကြပါဦး၊ ဘယ်လိုဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ကြိုစဉ်းစားကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပြီးသား အတွေးတခုကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား သားတိုင်းက မင်းတို့မြန်မာတွေကို ကူညီချင်ရင် အဖွဲ့တွေများလွန်းလို့ ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ် ရမှန်း မသိဘူးလို့ ပြောကြတယ်။
အရင်က လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့ ဖဆပလလို အများစုပါဝင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီး ဘုံရန်သူ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့စံနစ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့ အတိုက်အခံ အားလုံး စုစည်းပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ အဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ ၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး၊ တကမ္ဘာလုံးက လက်ခံနိုင်မည့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းတွေကို ချပြပြီး တပ်မတော်ကိုလည်း “ကျုပ်တို့တွေ ဒီအတိုင်းလုပ်ရင် နိုင်ငံပြိုကွဲစရာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ အားလုံးကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဘုံရန်သူ စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးကို ဖျက်သိမ်းကြစို့” ဆိုပြီး proposal တင်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ တပ်မတော်ထဲမှာလည်း ကမ္ဘာ့အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကိုလည်းမြင်နိုင်၊ ဒါတွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် တပ်မတော်အတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုလည်း ချနိုင်မယ့် အိုင်ဒီယာ အသစ်နဲ့ လူငယ်တွေ နေရာရလာရင် ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Crimson Tide ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တခုထဲမှာ Nuclear လက်နက်တင် ရေငုပ်သင်္ဘောတစီးပေါ်မှာ CO ကြီးက “ဂျပန်ကို အနုမြူကြဲတာ မှန်တယ်၊ ငါသာဆိုရင် တလုံးထပ်ကြဲဦးမယ်” ဆိုပြီး သင်ယူလာတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီတဲ့ သမ္ဘာရင့်စစ်သားကြီး၊ XO လေးက “စစ်ပွဲမှာ တကယ့်ရန်သူအစစ်ကစစ်ပွဲပဲ၊ မတတ်သာလို့ စစ်ဖြစ်ရင် အမြန်ဆုံး ပြန်ရပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်” ဆိုပြီး သင်ယူထားတဲ့ တက်သစ်စ၊ ပြဿနာတခုကို နှစ်ယောက် မတူတဲ့ အမြင်နဲ့ ရှင်းကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ CO ကြီးက ခေတ်သစ်မှာ သူကငါ့ထက်ပိုသင့်တော်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပြီး သူကAနားယူ၊ လူငယ်လေးကို ရာထူးတင်ပေးသွားတာ သဘောကျတယ်။ Old Gen တွေ အနားယူပြီး New Gen တွေကို လက်လွှဲရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ၊ အရည်အချင်းတွေကြောင့် လက်တွေ့ဖြစ်နေတာတွေ မြင်ရပြန်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့အကြောင်း အ်ိမ်မက်မက်နေတုန်း “ဆိုက်ကား အားလား” ဆိုမှ လန့်နိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ ဟာသကို သတိရမိတယ်။ “မင်းကမှ လေးလေးဝါး အစစ်” လို့ပြောရင်လည်း စိတ်ဆိုးမယ် မဟုတ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Posted by Unknown | at 1:15 AM |0comments
" အားလို.တောင်မအော်နိုင်ပါ "
Posted by Unknown | at 1:24 PM |0comments
ပျောက်ဆုံးပျက်ပြယ်ခဲ.သောအိပ်မက် ( သို.မဟုတ် ) အကြိုက်ဆုံးပို.စ်တစ်ခု
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ သမ္မတသက်တမ်းမှာ လေးနှစ်သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်သာဖြစ်သော်လည်း အာဏာရှင် မားကိုးစ်က အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာအောင် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် သမ္မတအဖြစ်၊ရွေးကောက်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းကာလ၌ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာ၍ သူ့စိတ်ကြိုက် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်ကို ထပ်မံရေးသားခဲ့သည်။
Posted by Unknown | at 5:35 AM |0comments
အကြိုက်ဆုံးပို.စ်တစ်ခု သို.မဟုတ် Olympics and World Order
ပြုပြင်စရာများကိုယ္ခုဘလော.မိတ်ဆွေမခင်မမမျိူးက scholar ရှင်တစ်ယောက်ပီသစွာသုံးသပ်ထားပါသည်။
Posted by Unknown | at 5:11 AM |0comments
ပျောက်ဆုံးပျက်ပြယ်ခဲ.သောအိပ်မက် ( သို.မဟုတ် ) အကြု...
အကြိုက်ဆုံးပို.စ်တစ်ခု သို.မဟုတ် Olympics and Wor...